I-Alabasta - iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla. - I-Airbnb
I-Alabasta - iflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJenny
Indawo yokuhlala yaseAlabasta, (kumgangatho osezantsi), iseOakura Village; kwimizuzu eyi-15 ukusuka eNew Plymouth kwiTaranaki 's unique Surf Highway 45. Kwindlela ephambili kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwizinto ezinokusetyenziswa kwilali kuquka iikhefi, ivenkile yokutyela yeVegan, ivenkile yokutya eyi-4 kunye nebhari yasekuhlaleni. I-Alabasta uhamba nje imizuzu eyi-5 ukuya kwi-Oakura Beach entle. Le yindawo efanelekileyo yokuhlala ixesha elifutshane okanye elide kunye neflethi okanye indlu ekwicomplex ephucukileyo.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex inokulala abantu abahlanu abanebhedi enkulu negumbi lokulala elinye; kunye nebhedi enkulu enamavili enye ejike yaba yibhedi elala abantu ababini okanye iibhedi ezimbini kwindawo yokuphumla. Inegumbi lokuhlambela elivulekileyo, ikhitshi elivulekileyo, indawo yokutyela kunye nendawo yokuphumla. Ixhotyiswe ukuze ungasokoli, iAlabasta inendawo yokuhlamba impahla nangaphandle kwendlela yokupaka.
I-Oakura yilali ethandekayo elunxwemeni enembono yeMt Taranaki ekufutshane. Le lali ineSikwere esine, iHotele, iKhemesti, iivenkile zezipho, iikhefi, indawo yokudlala yabantwana kunye neendlela zokuhamba ezingaselunxwemeni. Kukho iindawo ezininzi ezibalaseleyo zokusefa kufutshane, uLucy's Gully kunye ne-Egmont National Park kukumganyana nje omfutshane.
Isixeko saseNew Plymouth (abemi abangama-60,000) kuphela i-10-15 drive. Zininzi iindawo ezintle zokundwendwela ngexesha lokuhlala kwakho. Igalari yeLen Lye, iPaki yePukekura, iWalkway yoNxweme, iBrooklands Zoo kunye neegadi ezininzi zabucala zizinto nje ezimbalwa ezinomtsalane zalapha ekhaya.
Sifumaneka ngefowuni okanye ngomyalezo ukuba unemibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.